PressReader - Isolezwe: 2018-09-13 - I-Youth Connect Summit yeDBF izokwazisa, ikhuthaze, igqugquzele
I-Youth Connect Summit yeDBF izokwazisa, ikhuthaze, igqugquzele
Isolezwe - 2018-09-13 - IZINDABA -
I-DURBAN Business Fair (i-DBF) yakulo nyaka, ezoqala esikhathini esingaphansi kwesonto, izophinde igxile ekufukuleni abantu abasha njengoba izoba nezinto ezizothinta yona uqobo ohlelweni lwayo. Izinsuku ezimbili kwezinhlanu zeDBF kuzoba ngeze-Youth Connect Summit, ezoba se-Durban ICC mhla ka-21 nomhla ka-22 Septhemba.
Indikimba ye-Youth Connect Summit ithi: “Defining the new narrative for the African Renaissance and creating a lasting legacy, together,” okusho ukuvula isahluko esisha sokuvuselelwa kwe-Afrika ukwakha ngokuhlanganyela ikusasa elisimeme.
Isithangami sizoba nosomabhizinisi abaziwayo abangabantu abasha abazicabela indlela eya empumelelweni emikhakheni yabo ehlukene. Phakathi kwalabo abazokhuluma asebegcwalisile ukuthi bayeza, kubalwa umuntu odume ngokunandisa nokuba yisikhulumi esiqavile uSimo Nzama, usomahlaya uMondli Mzizi nomlingisi osedle izindondo uNomzamo Mbatha.
Zonke izikhulumi zizolanda indaba yazo neyohambo lwazo, ziluleke, zigqugquzele abantu abasha.
Indaba kaMzizi, exhumene kakhulu naleyo ye-DBF, akungatshazwa ukuthi baningi ezobazochaza futhi ibathinte. UMzizi wakhula ehlupheka, kwathi nakuba ehlangabezane nezinselelo eziningi endleleni kodwa waphumelela emsebenzini wokuba wusomahlaya nomuntu osemkhakheni wezikaqedisizungu. Usebenze ngokuzikhandla ukuzakhela igama kanti ungomunye wabantu abakhiqizwe yi-DBF. Waqala ukusebenza ewumgqumgquzeli wombukiso, wagcina engene emahlayeni ngohlelo lwamahlaya lwe-DBF ngo-2014, lapho ashiyelana inkundla khona nabanye osomahlaya.
Uhlelo lwalesi sithangami luncike efilimini eyingqophamlando nengundabamlonyeni, i-Black Panther, kanti phakathi kwezihloko ezizodingidwa kulezi zigcawu kubalwa lezi ezilandelayo:
• Izinselelo ezibhekene nentsha yase-Afrika nokuthi abantu abasha bangabambisana kanjani ukubhekana nazo; • Ukugubha ubu-Afrika ngezinkondlo, umdanso/ingoma nomculo; • Ukuqonda ukubaluleka kwamandla egama leciko noma lenkampani yalo nokuthuthukisa lelo gama.
Ingxoxo ngokubaluleka kwegama leciko noma lenkampani yalo izoholwa wuNomzamo, ozokhipha amabhasi awu-20 azothutha abantu abasha abaqhamuka eThekwini namaphethelo ukuzokwethamela isithangami.
Abantu abasha bayakhuthazwa ukuthi babheke ngeso lokhozi izinkundla zokuxhumana zikaNomzamo ngeminye imininingwane yokuthi ziyobe zimi kanjani izinto zokuhamba, izikhathi nezindawo ezilayisha kuzo.
Nakuba ezinye izikhulumi eziza kulesi sithangami zizomenyezelwa ngokuqhubeka kwesikhathi, akungatshazwa ukuthi i-Youth Connect Summit izoba wumcimbi ozohlomulisa abantu abasha abaningi, umcimbi omnandi nokungafanele uphuthele muntu.
Newspapers in Zulu